Le Guglie LT eVenice - I-Airbnb
Le Guglie LT eVenice
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguPaolo
I-Le Guglie LT yisakhiwo esiphuzi esiseziko lembali laseVenice, kwindawo yaseGetto yamaYuda, amanyathelo ambalwa ukusuka eRialto naseSt.
Ipropati ejongene neCannaregio Canal edityaniswe kwi-Grand Canal
I-Le Guglie LT sisakhiwo esinomtsalane esityheli esisembindini wembali yaseVenice, ebumelwaneni beGetto yamandulo yamaJuda, amanyathelo ambalwa ukusuka eRialto naseSt Mark's Square.
Ipropathi ijonge kwiCannaregio Canal eqhagamshelwe ngokuthe ngqo kwiGrand Canal eyaziwayo yehlabathi, eyaziwa ngamabhotwe ayo amahle kwaye anomdla agcwele imbali.
Sifumaneka kwisithili saseCannaregio, imizuzu engama-30 ngesikhephe ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMarco Polo, imizuzu emi-5 ukuhamba umgama ukusuka kwiSitishi sikaloliwe saseSanta Lucia kunye nemizuzu eyi-10 ukusuka e-Piazzale Roma, i-terminal yaseVenetian yeebhasi kunye neemoto.
Esona sithuthi sikawonke-wonke ibhasi ye-Actv stop water bus yi "Guglie" phambi kwethu.
Onke amagumbi akumgangatho wesibini wesakhiwo esisandula ukulungiswa.Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela le-en-suite, ishawa, i-air conditioning, i-sefu, ifriji encinci, i-intanethi ye-WIFI ye-intanethi kunye ne-TV ye-satellite ene-SKY.Ngaphaya koko igumbi libonelelwa ngekhitshi elixhotyiswe kakuhle nayo yonke imfuneko oyifunayo.
I-Le Guglie LT yindawo epholileyo yosapho apho unokuhlangana nabantu abavela kwihlabathi liphela kwaye wenze abahlobo ngokulula kusasa ekhitshini elifanayo!
Igama lam ndinguPaolo, ndingumamkeli wakho ophethe i-appartment, ndingumhlobo kwaye ndiyakwazi ukuthetha isilungu njengoko ndandihlala kwaye ndinomsebenzi eLondon(UK) kudala!Ungabelana nam ngamava akho eVenetian kwaye undibuze ngalo lonke ixesha iingcebiso okanye izalathiso !!!!
4.74 out of 5 stars from 444 reviews
4.74 · Izimvo eziyi-444
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi444
Ndihlala kwigumbi elikumgangatho obandayo wesakhiwo ke, ndithembeke kakhulu ekuseni ukusuka ngo-8:00 ukuya ku-12:00 kwaye ndihlala ndilala apha.Ebudeni basemva kwemini nangorhatya ngaphandle kokuba ndilinde nabani na ukuba aze kungena, ndihlala ndiphila ubomi bam kwaye andikho esakhiweni.
Ndihlala kwigumbi elikumgangatho obandayo wesakhiwo ke, ndithembeke kakhulu ekuseni ukusuka ngo-8:00 ukuya ku-12:00 kwaye ndihlala ndilala apha.Ebudeni basemva kwemini nangorhatya…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Venezia